Ny tsihy alika mamelombelona tsara indrindra | World Dogs
Ny tsihy fampangatsiahana tsara indrindra ho an'ny alika
Ny tsihy alika mamelombelona dia hevitra tena tsara mba hampangatsiaka ny alikanao amin'ny ora fahavaratra. mafana kokoa. Mahazo aina sy mora ampiasaina, dia tena manampy tokoa ireo alika izay manana fotoana ratsy kokoa amin'ny hafanana, satria hihena vetivety izy ireo.
Ato amin`ity lahatsoratra ity isika dia hiresaka momba ny tsara indrindra coolant rugs ho an`ny alika izay hitantsika ao amin'ny Amazon, fa hamaly ireo fanontaniana mahazatra indrindra mifandraika amin'ity karazana vokatra ity ihany koa izahay ary hanome anao torohevitra vitsivitsy hodinihina rehefa mividy izany. Ho fanampin'izany, manoro hevitra ihany koa izahay mba hijery ity lahatsoratra mifandraika amin'ny dobo tsara indrindra ho an'ny alika.
Nobility - Carpet ...
Manenjika karipetra ...
Nobility - Mat...
1 Ny tsihy fampangatsiahana tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Karpet fampangatsiahana tena
1.2 XL mangatsiatsiaka
1.3 Tsihy mamelombelona amin'ny habe samihafa
1.4 Tsihy mamelombelona mahafinaritra
1.5 bodofotsy miforitra mamelombelona
1.6 Tsihy mamelombelona misy printy dobo
1.7 Cooling pad
2 Inona no atao hoe tsihy alika mangatsiaka ary ho an'iza izy ireo?
3 Ohatrinona ny alika amin'ny karipetra toy izany?
4 Ahoana ny fampiasana tsihy fampangatsiahana?
5 Hafiriana ny fotoana mahafinaritra omeny?
6 Torohevitra rehefa misafidy tsihy mangatsiaka ho an'ny alika
7 Aiza no hividianana karipetra alika mangatsiaka
Karpet fampangatsiahana tena
Raha mitady vokatra mangatsiaka ianao nefa tsy mila apetraka ao anaty vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana dia mety aminao ity modely ity. Izy io dia misy sosona lamba maromaro, ary ny iray amin'ny gel, izay mangatsiatsiaka ho azy (eny, tsy misy loharano mafana eo akaiky eo, ka tsy maintsy esorinao eo ambanin'ny alikanao izany mba hamerenana). Ny lamba dia tantera-drano ary tena mora diovina, satria tsy maintsy mamafa azy amin'ny lamba mando ianao (tsy tokony hodiovina amin'ny milina). Ankoatra izany, azonao atao ny mampiasa ny tsihy amin'ny zavatra hafa, toy ny hampangatsiaka ny solosaina, hamelombelona ny tenanao, hanosotra mangatsiaka amin'ny faritra marary ... Misy loko roa sy habe samihafa.
Eny, ao @ commentaire dia voalaza fa tsy dia mahery loatra, ka raha mila zavatra mahery vaika kokoa ianao dia tsy maintsy misafidy modely hafa.
Ho an'ny alika lehibe kokoa dia ilaina ny tsihy mamelombelona izay mifanaraka amin'ny asa. Ity modely ity dia 120 sm ny halavany, mahatonga azy ho malalaka mandritra ny fotoana fohy. Mangatsiaka ihany koa izy amin'ny fanerena ny vatan'ny biby, satria manana velaran-tany bebe kokoa izy, dia haharitra ela kokoa ny hafanany (antony iray hafa tokony hijerena ny haben'ny alika alohan'ny hividianana azy). Ankoatra izany, mora ny manadio azy ary azonao aforitra amin'ny telo ho fitahirizana tsara kokoa.
Ny teboka ratsy hita ao amin'ny fanehoan-kevitra dia izany ny fitaovana dia tsy dia mahatohitra, ary mora amin'ny alikantsika ny manaikitra azy.
Tsihy mamelombelona amin'ny habe samihafa
Ny marika alemana fanta-daza Trixie dia manana ny endriny manokana amin'ireo karipetra alika mamelombelona ireo. Izy io dia manana habe 4 azo alaina amin'ny vidiny mirary (ny lafo indrindra dia manodidina ny roapolo euros) ary mety ho iray amin'ireo modely manify indrindra eny an-tsena. Ny lamba dia maka polyester ary, toy ny modely hafa, mangatsiaka rehefa mandry eo ny alika. Na dia tena mahatohitra sy manify aza izy io, ny fanehoan-kevitra sasany dia manantitrantitra fa ny havaozina omeny dia mety.
Tsihy mamelombelona mahafinaritra
Raha tsy tianao ny loko manga izay matetika mifandray amin'ity vokatra ity, ho tianao ity modely ity, satria misy loko roa (volontsôkôlà vato sy tanimanga) misy endrika tena mangatsiatsiaka azo ampiasaina, toy ny taolana. Na dia manify be aza ny tsihy, dia feno gel sy foam izay mahatonga azy ho vokatra mampahazo aina sy mangatsiaka. Ankoatra izany, dia tantera-drano izy io ary mora sasana.
bodofotsy miforitra mamelombelona
Firakotra alika mamelombelona...
Iray amin'ireo endri-javatra mahaliana indrindra amin'ny Ity bodofotsy mahafinaritra ho an'ny alika ity dia azo aforitra be, ka zara raha maka toerana ary azonao entina miaraka aminao. mora be. Satria mangatsiaka ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny biby, dia tsy mila manahy momba ny fametrahana azy ao anaty vata fampangatsiahana ianao. Na dia tsy mahatohitra loatra aza, dia mahafinaritra ny fikasihana ary tsy tantera-drano ny lamba, ka azo sasana mora foana.
Tsihy mamelombelona misy printy dobo
Iokheira Floor Mat ...
Raha mitady endrika mahafatifaty ianao, dia ho sarotra ny handresy an'io lamina io izay manahaka ny rano ao anaty dobo filomanosana, na dia modely aza izy io, raha oharina amin'ny hafa ao amin'ny lisitra, somary lafo kokoa. Tsy voatery atao anaty vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana izany ary vita amin’ny lamba telo sosona ka mahatohitra araka izay azo atao ny hohotry ny biby fiompinao.
Mifarana amin'ny iray amin'ireo tsihy alika mamelombelona izay mampanantena fa hampihena ny mari-pana amin'ny vatana amin'ny ambaratonga iray sy sasany ny alikanao. Ny gel dia mampangatsiatsiaka ny tenany, ka ny biby fiompinao dia tsy maintsy miakatra eo amboniny fotsiny vao manomboka mankafy ny hatsiaka. Maharitra adiny 3 ka hatramin’ny 6 ora ny hatsiaka, ka mety amin’ny torimaso lava.
Inona no atao hoe tsihy alika mangatsiaka ary ho an'iza izy ireo?
Ny tsihy alika mamelombelona dia famoronana lehibe ahafahan'ny alikanao mangatsiaka amin'ny ora mafana indrindra amin'ny andro. Matetika izy ireo dia vita amin'ny singa tsy misy poizina (toy ny rano sy ny gel) izay manampy amin'ny fisorohana ny hafanana. Raha ny marina dia tena ilaina izy ireo satria manampy amin'ny fampangatsiahana ny alika, izay miantehitra fotsiny amin'ny paompy ary mifoka rivotra mba handaminana ny hafanan'ny vatany (tsy tsemboka amin'ny hodiny ny alika, fa tsy toy ny olombelona).
Ireo vokatra ireo tena ilaina izy ireo amin'ny toerana misy fahavaratra mafana na toetr'andro mafana mandritra ny taonaAnkoatra izany, manakana ny alikanao tsy ho voan'ny hafanana izy ireo ary hanampy azy hatory tsara kokoa. Raha fintinina dia hanatsara ny kalitaon'ny fiainanao mandritra ny ora mafana indrindra izy ireo.
Ohatrinona ny alika amin'ny karipetra toy izany?
Satria tsy fitaovana elektrika izy io, ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia vita amin'ny fitaovana tsy misy poizina (tadidio ny manamarina izany alohan'ny hanomezana azy ny alikanao), amin'ny ankapobeny dia tsy misy olana amin'ny fampangatsiahana azy raha mbola tiany. . Na izany aza, dia tsara kokoa noho ny rehefa mampiasa vokatra toy izany ny biby fiompinao dia eo ambany fanaraha-masonaoZava-dehibe indrindra izany ho an'ny alika tia mikitikitika zavatra, satria mety handrovitra tapa-kazo sy kenda, na hijaly noho ny sakana.
Ahoana ny fampiasana tsihy fampangatsiahana?
Na dia miankina amin'ny modely aza izany, Ny tsihy alika mamelombelona dia matetika tena mora ampiasaina. Raha ny marina, ny ankamaroany dia tsy mila apetraka ao amin'ny vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana, satria mangatsiaka eo ambanin'ny faneren'ny vatan'ny alika. Mba hamerenana azy ireo dia tsy maintsy manala ny biby fiompinao eny ambony ianao mandritra ny fotoana fohy.
Hafiriana ny fotoana mahafinaritra omeny?
Averina indray, hiankina amin'ny anton-javatra ivelany toy ny hafanana na ny vokatra ny hamaritana tsara hoe ohatrinona ny fotoana mangatsiatsiaka homeny ny alikantsika. Fa na izany aza, amin'ny ankapobeny dia adiny fito eo ho eo ny salan'isa.
Torohevitra rehefa misafidy tsihy mangatsiaka ho an'ny alika
Rehefa mividy tsihy mamelombelona ho an'ny alikantsika isika dia afaka mandinika toro-hevitra maromaro hanandramana hahazoana tsara ny fividianana. Ohatra:
Si tia manaikitra ny alikanao ary manana fironana haka ny zava-drehetra, mitadiava karipetra izay mahatohitra indrindra. Ankoatr'izay, rehefa mampiasa azy ianao dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-mason'ny masonao mba hahazoana antoka fa, ohatra, tsy nisy sombiny natelina ka afaka nandrovitra.
El haben'ny alika Izany koa, araka ny hita, dia lafin-javatra iray hafa tokony hodinihina rehefa mividy ny iray amin'ireo vokatra ireo. Eritrereto koa ny haben'ny vata fampangatsiahana na ny vata fampangatsiahana anao raha hifidy modely tsy maintsy ampangaina amin'ity fomba ity ianao.
Miverina amin'ny alika tia manaikitra, na raha te handray fepetra fotsiny ianao dia ataovy izay ny fitaovana nanaovana ny karipetra dia tsy misy poizina.
Farany, andramo misafidy a lamba izay ho tianao. Tena ilaina ny mahazo aina ny alika rehefa mampiasa ny karipetra, noho izany, mba hanamora ny zava-drehetra, mitadiava lamba izay fantatrao fa tiany (ohatra, mitovy amin'ny bodofotsy tiany indrindra, ny sofa ...). Mba hahazatra azy, ny andro voalohany dia afaka mamela kilalao sy loka eo amin'ny karipetra ianao mba hampifandray azy amin'ny zavatra tsara ary manomboka mampiasa azy tsy misy tahotra.
Aiza no hividianana karipetra alika mangatsiaka
Angamba satria vokatra manokana izy ireo, Sarotra ny mahita tsihy alika mamelombelona amidy ivelan'ny fivarotana manokana. Noho izany, amin'ireto toerana manaraka ireto ihany no hahitanao ity vokatra ity:
En Amazon, satria manana tanteraka ny zava-drehetra izy ireo, ary ambonin'izany dia misy modely maro samihafa. Na dia mety ho sarotra aza ny mahazo hevitra hoe manao ahoana ny fitaovana alohan'ny hahatongavany, ny fiverenany sy ny rafitra fanaterana dia tena tsara, ka afaka manapa-kevitra mora ianao raha nety ny fividianana na tsia.
Betsaka koa ny fivarotana an-tserasera manokana ho an'ny biby (toy ny TiendaAnimal, Kiwoko ...) izay ahitanao ity karazana vokatra ity. Ny tsara dia afaka mandeha mivantana any amin'ny fivarotana ianao ary mijery ny vokatra (toy ny habe, lamba ...).
Farany, ao amin'ny toeram-pivarotana sasany Toa an'i Carrefour dia afaka mahita an'io vokatra io ihany koa ianao, na dia amin'ny aterineto ihany no misy azy matetika, satria matetika ny mpivarotra ivelany no mivarotra azy.
Ny tsihy alika mamelombelona dia fomba tsara hitazonana ny alikanao mangatsiaka amin'ireo andro mafana indrindra amin'ny taona. Lazao anay, efa nanandrana ny iray amin'ireto bodofotsy ireto ve ianao? Nanao ahoana ny traikefanao? Ary ny alikanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny tsihy fampangatsiahana tsara indrindra ho an'ny alika
Inona no sakafo mety amin'ny taonan'ny alika tsirairay?